Wararka - Panama Metro Line 2 Mashaariic
Khadku wuxuu leeyahay dherer dhan 21 kiiloomitir oo ah waddo aad u sarreeya wuxuuna ka kooban yahay 16 saldhig oo leh sagxad ballaadhan, oo gaadhay dabool iyo ilaalin weyn xilli -roobaadka. Intaa waxaa dheer, waxay ka kooban yihiin alwaaxyo aluminium ah iyo nalal polycarbonate ah oo u shaqayn doona sidii kaydiyaha tamarta, iyadoo ay ugu wacan tahay isticmaalka nalalka dabiiciga ah. Waa mashruuc badbaado leh, maaddaama oo uu leeyahay habraacyo ilaalin oo gaar ah inta uu socdaalka ku jiro, oo fulinaya hababka kontaroolka otomaatiga ah.
Mashruucu waa tusaalaha dhabta ah ee kaabayaasha bulshada. Intii lagu guda jiray dhismaheeda waxaa ka qaybgalay in ka badan 6,000 oo shaqaale ah, kuwaas oo in ka badan 70% ay ahaayeen dadka deggan bulshooyinka ku xeeran shaqada. In ka badan 98 beelood iyo 48 xarumood oo waxbarasho oo lagu dhajiyay mashruuca oo dhan ayaa mashruuca ka faa'iideystay, sidaas darteedna wuxuu kor u qaaday tayada nolosha in ka badan 500,000 oo qof oo ku nool bariga Panama.
Kaabayaasha ayaa loogu talagalay in lagu qaado in ka badan 16,000 oo rakaab ah saacaddii iyo jihada, iyadoo socdaalku yahay 35 daqiiqo. Waxaa loogu talagalay awoodda ugu badan ee mustaqbalka ee 40,000 oo rakaab ah inta lagu jiro saacadaha ugu sarreeya waxaana loo habeeyay dadka awoodda yar.
Qandaraaska dhismaha Laynka 2 ee Panama Metro wuxuu ka kooban yahay adeegyada injineernimada naqshadeynta, shaqooyinka madaniga ah, rakibidda xarriiqda dheeraadka ah, sahayda iyo rakibidda nidaamka tareenka oo dhammaystiran oo ay ku jiraan kaydka duudduubidda iyo bilowga khadadka.
Shaqooyinka waxaa ka mid noqon doona 16 xarumood iyo 21 kiiloomitir oo khadadka tareenka ee sarreeya, oo isku xiraya saldhigyada degmada San Miguelito ilaa 24 de Diciembre. Waxaa ku jira saddex nooc oo saldhig oo kala duwan:
Jidadka dhexe, bakhaarka iyo saldhigyada gaarka ah. Naqshadda hore waxay dejisaa socodka 16,000 rakaab saacaddiiba dhinac kasta. Mashruucan waxaa ka faa'iideysan doona qiyaastii nus milyan qof oo ku nool degmada bariga Panama.
Ace ayaa bixisa mashaariicdan: Waxaan bixinnay dhammaan 17 -ka saldhig ee la xiriira balustrade galaas birta ah, wadarta tirada in ka badan 8,000 mitir liner. Wadarta Mashaariicda Qiimahoodu wuxuu ka badan yahay USD800,000.
Waqtiga dhejinta: Aug-09-2021